One Championship မှရွေးချယ်ပြသလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲ၇ပွဲအဆုံးသတ်ဗီဒီယိုဖိုင် - Myanmarload
One Championship မှရွေးချယ်ပြသလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲ၇ပွဲအဆုံးသတ်ဗီဒီယိုဖိုင်
လွန်ခဲ့သော ၂ လ က 10:38 March 14, 2019
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကလေးစားအားကျနေရတဲ့ မြန်မာ့ကိုယ်စားပြု One Championship (MMA) ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကို အားလုံးလည်း ကြားသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပွဲကောင်းများစွာကို ဖန်တီးထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လက်ဝှေ့သမားများစွာရဲ့ လေးစားမှုကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အောင်လကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လက်ဝှေ့ကစားသမားဆုနှင့် အကောင်းဆုံးပွဲဆုတို့ကို ရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အကောင်းဆုံးပွဲဆုကိုတော့ ဂျပန်ဖိုက်တာ ခန်ဟစဲဂါဝါနှင့် ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခြားခြားသောပွဲကောင်းများစွာရဲ့ ရလဒ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေအားကျခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက One Championship အဖွဲ့ကြီးကအောင်လအန်ဆန်းမအတွက် အကောင်းဆုံးပွဲအဆုံးသတ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြသလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ အောင်လရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲ ၇ပွဲရဲ့ အဆုံးသတ်တွေကိုရွေးချယ်ပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်း ကြည့်ရှု့ကျေနပ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ့ကိုယ်စားပြုကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကြီးရဲ့ အကြိုက်ဆုံးတိုက်ကွက်တွေကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Tomorrow night @onechampionship ! Here we go @henrihooft @hardknocks365 @hkickboxing @coachgjones @kamibarzini @drcpeacock @ssorianomma I believe I am the best version of myself.
A post shared by Aung La Nsang (@aunglansang) on Oct 24, 2018 at 10:32pm PDT